Galmudug: Doorashada Labada Aqal Ee Baarlamaanka Waa Looga Diyaargaroobay Cadaado – Goobjoog News
Magaalada Cadaado ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ayaa looga diyaargaroobayaa doorashada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee ka imaanaya degaannada maamulka Galmudug.
Waxaa magaalada Cadaado iyo degaanno kale ka socda qorista iyo diyaarinta ergooyinka la doonayo inay soo doortaan xubnaha baarlamaanka ee aqalka hoose.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Galmudug Daahir Faarax Fiidow ayaa u sheegay Goobjoog News inay howsha diyaargarowga ay si fiican u socoto.
Wasiir xigeenka ayaa sheegay in ay diyaarinayaan ergadii wax dooran lahayd kadibna ay dhici doonto doorashada lagu tartamayo ee xubnaha u taagan baarlamaanka federaalka ay wada geli doonaan.
“Diyaargarowgeenna aad buu u sarreeyaa waxaa aad loo adkeeyay ammaanka cidda wax dooranaysana waa ergo ka dowlad ahaan waynu martigelinaynaa waana wadnaa howsha” ayuu yiri Wasiir xigeenka warfaafinta Galmudug.
Dib u dhaca ku yimid doorashada Madaxtinimo iyo saameynta u muuqata ayuu sheegay in waqti aan fogeyn liiska aqalka sare ay gudbin doonaan islamarkaana aqalka hoose uu ku sii xigo.
Wuxuu meesha ka saaray in ergo maamulka uu qorayo aynaan jirin, hase yeeshee ay howshaas leeyihiin odayaasha dhaqanka oo ay soo xulayaan islamarkaana guddiga doorashooyinka heer maamul ay kala shaqeynayaan.
Magaalada Cadaado iyo degaanno kale oo Galmudug ah waxaa ku sii qulqulaya dadka aad u doonaya inay kamid noqdaan labada aqal ee baarlamaanka dowladda cusub iyo xubno dadkaasi u ololeynaya.
Ergadii Gobolka SH. Hoose u matalayay Maamulka 6-da gobol oo isaga baxay maamulkaasi
Beeraleyda Baardheere Oo Cabasho Ka Ah Cayayaan Waxyeello U Geystay Dalaga Ay Beertaan
Oceqwm caahtk Get cialis online cialis 5mg
Wvuzva checnj Buy cheap cialis cialis online
Iamcik btshgq Buy pfizer viagra cialis without a doctor prescription
Sizibp jjceqy viagra 100mg cialis from india
Eyjmwd mmaulh Buy viagra pharmacy online
WAR DEG-DEG: Qarax goor dhow ka dhacay agagaarka Villa Baydhabo
Gsutvg oqurfa cvs pharmacy Bonif...
Bbymal helpdz online pharmacy Tkznj...
Ghhwbh jdtpyb walmart pharmacy Scjyw...
over counter ed pills walmart http://www.cialij.com/...
Qxezht tojloc walmart pharmacy Gtbbg...